१८ बर्षका देवरलाई लुकीलुकी काेठामै बाेलाएर पेटमा बच्चा बस्दा ससुरालाई पेट सुनियाे भनेपछि.. – Daily NpNews
कल्पना र रमेश प्रसाई बीच प्रेमको चर्चा भै रहंदा अचानक नन्दा सिंहसंग बिवाह हुने भएपछि रमेश प्रसाई ले मुख खोले (भिडियो)
विश्वलाई चकित पारेकी सपनाको रुवाउने कथा – आशु झार्दै सम्झिन सानैमा भएको बिहे अनी बिछोड
रचना रिमाल ठुलो तनावमा । टिकटकमा किन रुदै आईन् ? मु’द्धा हाल्छु भन्दा यस्तो भयो (भिडियो हेर्नुस )
कोरोनाले पहिलो पुस्ता सखाप, मृत्युको केही समयअघि शिशू जन्माइन् परिवारकै एक्ली छोरीले
आदित्य नारायणले भित्र्याए श्वेतालाई बेहुली बनाएर, विवाहको पहिलो तस्बिर सार्वजनिक भयो (तस्बिर हेर्नुस्)
पेटको बोसो पगाल्नको लागि अत्यन्त लाभदायक हुन्छ यी २ चिज, पाँच दिन भित्र देखिन्छ नतिजा
कोरोना लागेका मानिसहरुको दाँत झर्न थालेपछि बैज्ञानिकहरु पनि छक्क, हातले दाँत छुँदा दाँतहरु झरे
फुटबल टिमकी कप्तान रेनुका विवाह बन्धनमा
गाडी चलाउँदा सधैं ख्याल गर्नुपर्ने यी हुन् चार अवस्था
रमेश प्रसाई र कल्पना दाहालको विश्वभरी बिहेको चर्चा चल्दा दोहोरीबाटै खोले बिहेको रहस्य
मुख्य पृष्ठ /रोचक/१८ बर्षका देवरलाई लुकीलुकी काेठामै बाेलाएर पेटमा बच्चा बस्दा ससुरालाई पेट सुनियाे भनेपछि..
१८ बर्षका देवरलाई लुकीलुकी काेठामै बाेलाएर पेटमा बच्चा बस्दा ससुरालाई पेट सुनियाे भनेपछि..
भाउजु आमा समान हुन्’ भन्ने भनाईलाई कैलालीका एक युवाले मिथ्या सावित गरेका छन्। आमालाई जस्तो सम्मान गर्नुपर्ने आफ्नै भाउजुलाई गर्भवती बनाएर ती युवाले यस्तो हर्कत देखाएका हुन्। प्राप्त जानकारी अनुशार कैलालीको लम्कीमा एक १८ वर्षीय देवरले भाउजुलाई गर्भवती बनाएका हुन्।
दाजु विदेश गएको मौका पारी भाउजुसँग सल्किएका ती देबरले एक छोरीकी आमालाई गर्भवती बनाएका हुन्। श्रीमान विदेश गएको एक वर्ष पछि ती महिला गर्भवती भएकी थिइन्। गर्भवती भएकी ती महिलाले लाजै पचाएर ससुरालाई पेट सुनियो भनी झुट्टो बोलेर उपचारको बाहनामा अस्पताल गएपछि गर्भवती भएको रहस्य खुलेको हो। उनका श्रीमान् रोजगारीको सिलसिलामा मलेशीया छन्।
श्रीमान् नभएको मौकामा ती महिलाले कान्छा ससुराका कान्छा छोरा देवरसँग लसपस गरेकी थिइन्। महिलाले देवकोटाकै गर्भ रहेको स्वीकार गरेपछि ससुराले बुहारीलाई घरमा नराख्ने बताएका छन्। ती महिलाले देवरलाई घरमै बोलाएर यौ-न सम्बन्ध राख्ने गरेको पनि स्वीकार गरेकी छिन्।
यौ-न सम्र्पक गर्ने देवर भने भारतमा रोजगारी गर्दै आएका छन्। पारिवारिक स्रोतका अनुसार देवरले आफुलाई भाउजुले जवरजस्ती यौ-न सम्पर्क गर्न लगाएको बताएका छन्। ‘केटीएमनेपालबाट साभार’
‘ब’ला’ त्का’रपछि ह ’त्या’ गरिएकी भनिएकी युवती अ’न्तिम सं’स्का’रको १० दिनपछि जि’उँदै फ’र्कि’एपछि
घरको कुन दिशामा मनिप्लान्ट राम्रा शुभ मानिन्छ ?
सबैभन्दा क’न्जुस हुन्छन् यी राशि भयका मानिस, तपाईको कुन राशि ?
पोखरामा १४ वर्षीया अबिबाहित बालिकाले बच्चा जन्माएपछि दिएको बयानले प्रहरी नै चकित !
हराएको पर्स १४ वर्षपछि भेटियो, त्यसमा भएको पैसा पनि सुरक्षित ! तर…